Afrin vs. Flonase: ကွဲပြားခြားနားမှုများ၊ တူညီခြင်းနှင့်သင့်အတွက်ပိုကောင်းသည် - မူးယစ်ဆေးဝါး သူငယ်ချင်း | ဇွန်လ 2022
ကျန်းမာရေးပညာရေး ကျန်းမာရေးပညာရေး၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆန် ကုမ္ပဏီ, အဆိုပါကုန်ပစ္စည်း ကနျြးမာရေးပညာရေး, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ သတင်း၊ ကုမ္ပဏီ, သတင်း မူးယစ်ဆေးဝါးသတင်း မူးယစ်ဆေးဝါးသတင်း, သတင်း ကုန်ပစ္စည်း ပြင်းထန်သောအားကစား ဖျော်ဖြေရေး သတင်း ကုမ္ပဏီ, မူးယစ်ဆေးဝါးဆိုင်ရာအချက်အလက် ကုမ္ပဏီ, ကျန်းမာရေးပညာရေး
အဓိက >> မူးယစ်ဆေးဝါး သူငယ်ချင်း >> Afrin vs. Flonase: ကွဲပြားခြားနားမှုများ၊ တူညီခြင်းနှင့်သင့်အတွက်ပိုကောင်းသည်
နှာခေါင်းလမ်းကြောင်း၏သွေးကြောများနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ရှိတစ်ရှူးများကပိုလျှံသောအရည်များကြောင့်လွှမ်းမိုးလာသောအခါနှာခေါင်းပိတ်ဆို့မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ၎င်းသည်ရှူရှိုက်မိစေရန်နှာခေါင်းသွေးယိုရောဂါဖြစ်စေသည်။ နှာခေါင်းပိတ်ဆို့ခြင်း၊ နှာချေခြင်း၊ နှာချေခြင်း၊ ချောင်းဆိုးခြင်း၊
Afrin (oxymetazoline) နှင့် Flonase (fluticasone propionate) တို့သည်နှာခေါင်းမှုန်ရေမွှားတစ်ခုစီဖြစ်ပြီးနှာခေါင်းပိတ်ဆို့ခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောရောဂါလက္ခဏာများကိုသက်သာစေသည်။ သူတို့နှစ် ဦး စလုံးနှာခေါင်းမှုန်ရေမွှားဖြစ်သော်လည်း, သူတို့ကပိတ်ဆို့မှုကိုလျှော့ချသောအားဖြင့်ယန္တရားသည်အလွန်ကွဲပြားခြားနားသည်။
Afrin နဲ့ Flonase ရဲ့အဓိကကွာခြားချက်တွေကဘာလဲ။
Afrin, oxymetazoline, တွင်ပါဝင်သောအရာသည် alpha-adrenergic agonist ဖြစ်သည်။ နှာခေါင်းလမ်းကြောင်းများတွင်အများအားဖြင့်အသုံးပြုသောအခါ၎င်းသည် vasoconstrictor ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်နှာခေါင်းလမ်းကြောင်း၏တစ်သျှူးများနှင့်သွေးကြောများသို့စီးဆင်းစီးဆင်းမှုနှင့်လေကြောင်းအဖွင့်အပိတ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
Afrin သည် ၁၀ မိနစ်သာထိထိရောက်ပြီး၊ ၎င်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုသည် ၁၂ နာရီအထိကြာနိုင်သည်။ ၎င်းသည်အလွန်ထိရောက်သော decongestant ဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်သုံးရက်ကျော်အသုံးပြုသောအခါပြန်လည်ခုန်ထွက်ခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်ဟူသောအထောက်အထားရှိသည်။ ထို့ကြောင့်, ရေရှည်အသုံးပြုရန်အကြံပြုသည်မဟုတ်။ Afrin ကို 0.05% oxymetazoline ပါဝင်သောနှာခေါင်းမှုန်ရေမွှားနည်းအမျိုးမျိုးတွင်ရရှိနိုင်သည်။ 15 ml နှင့် 30 ml package အရွယ်အစားရနိုင်သည်။ Afrin ကိုဆေးညွှန်းမပါဘဲ over-the-counter (OTC) ရနိုင်သည်။ Afrin သည်အသက် (၆) နှစ်အောက်ကလေးများနှင့်အရွယ်ရောက်သူများအတွက်မဖော်ပြထားပါ။
flonicasone propionate သည် corticosteroid ဖြစ်သည်။ corticosteroids ကိုနှာခေါင်းလမ်းကြောင်းများတွင်နေရာအနှံ့တွင်အသုံးပြုသောအခါ၎င်းသည် antipruritic, inflammatory နှင့် vasoconstrictive ဂုဏ်သတ္တိများကိုပြသည်။ corticosteroids သည် lipocortins ဟုလူသိများသော peptides များကိုသွေးဆောင်ခြင်းဖြင့်၎င်းသည်ရောင်ရမ်းဖျန်ဖြေသူများ၏ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်လွှတ်ပေးခြင်းကိုလျော့နည်းစေသည်။ Flonase ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုသည်တသမတ်တည်းအသုံးပြုပြီးနောက်အချိန်ပိုတည်ဆောက်ခြင်းဖြစ်သဖြင့် Flonase ၏အကျိုးကျေးဇူးကိုအပြည့်အဝနားလည်ရန်ရက်ပေါင်းများစွာသို့မဟုတ်ရက်သတ္တပတ်များစွာကြာနိုင်သည်။ Flonase ကိုဆေးညွှန်းအရရနိုင်သည်။ ဆေးညွှန်းအနေဖြင့်၎င်းသည်ရေမှုန်ရေမွှား ၁၂၀ ပါသောနှာခေါင်းမှုန်ရေမွှားဖြစ်သည်။ over-the-counter ဗားရှင်းကိုရေမှုန်ရေမွှား ၆၀ သို့မဟုတ် ၁၂၀ ဖျန်းပုလင်းများအဖြစ်ရရှိနိုင်သည်။ Flonase ကိုအသက် ၄ နှစ်နှင့်အထက်ကလေးများနှင့်အရွယ်ရောက်သူများအတွက်အသုံးပြုနိုင်သည်။
Afrin နှင့် Flonase အကြားအဓိကကွာခြားချက်များ
မူးယစ်ဆေးအတန်း Alpha-adrenergic agonist corticosteroid
ယေဘုယျနာမည်ကဘာလဲ? Oxymetazoline Fluticasone propionate
မည်သည့်ပုံစံ (များ) ကိုမူးယစ်ဆေးဝါးထဲသို့ဝင်သနည်း။ နှာခေါင်းမှုန်ရေမွှား နှာခေါင်းမှုန်ရေမွှား
စံသောက်သုံးသောကဘာလဲ? နှာခေါင်းတစ်ခုစီတွင်နှစ်နာရီမှသုံးကြိမ်မှုတ်ဆေး ၁၂ နာရီလျှင်တစ်ကြိမ် နေ့တိုင်းနှာခေါင်းတစ်ခုစီတွင် ၁ မှ ၂ မှရေမှုန်ရေမွှား
ပုံမှန်ကုသမှုဘယ်လောက်ကြာမလဲ ၃ ရက်မှ ၅ ရက်အထိ လပေါင်းများစွာမှလပေါင်းများစွာ
ဒီဆေးကိုဘယ်သူကပုံမှန်သုံးသလဲ။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူ၊ အသက် ၆ နှစ်နှင့်အထက်ကလေးများ အရွယ်ရောက်ပြီးသူ၊ ကလေးသူငယ်များအသက် ၄ နှစ်နှင့်အထက်
Afrin နှာခေါင်းပိတ်ဆို့မှုကိုကုသရန်ညွှန်ပြသည်။ ၎င်းကိုနှာခေါင်းဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများတွင် vasoconstriction ကိုသွေးဆောင်ရန် Off-label ကိုအသုံးပြုသည်။ Afrin သည်ရောင်ရမ်းခြင်းနှင့်မတည့်သည့်ဖျန်ဖြေသူများကိုတိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိပါ။
Flonase သည်ဆေးညွှန်းနှင့်မတည့်သော (နှစ်ရှည်) rhinitis ကိုကုသရန်ညွှန်ကြားထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဆေးမသောက်ရသေးသောထုတ်ကုန်သည်အထက်ဖော်ပြပါအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာဓာတ်မတည့်ရောဂါလက္ခဏာများကို hay fever သို့မဟုတ် allergic rhinitis နှင့်ကုသရန်ဖြစ်သည်။ ဤရောဂါလက္ခဏာများတွင်နှာခေါင်းရှူခြင်း၊ နှာချေခြင်း၊ နှာရည်ယိုခြင်း၊ နှာခေါင်းယားယံခြင်း၊ ၎င်းသည်ဤရောဂါလက္ခဏာများအားလုံးကိုညွှန်ပြသည့်နှာခေါင်းမှုန်ရေမွှားတစ်ခုတည်းဖြစ်သည်။
အခြေအနေ Afrin Flonase
Sinus ပိတ်ဆို့မှုကို ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်
နှာခေါင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအတွက် Vasoconstriction တံဆိပ်ကပ်ထားပါသည် မဟုတ်ဘူး
မတည့် rhinitis မဟုတ်ဘူး ဟုတ်တယ်
Nonallergic rhinitis မဟုတ်ဘူး ဟုတ်တယ်
အထက်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာဓာတ်မတည်လက္ခဏာများ မဟုတ်ဘူး ဟုတ်တယ်
Afrin သို့မဟုတ် Flonase ကပိုပြီးထိရောက်သလား။
Afrin ၏လုပ်ဆောင်မှုသည် ၁၀ မိနစ်ခန့်ဖြစ်ပြီး၊ လူနာများကိုနှာခေါင်းလက္ခဏာများကိုသက်သာစေနိုင်သည်။ ကံမကောင်းစွာပဲ, သုံးရက်သို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းတိုတိုရေတိုအသုံးပြုရန်အကြံပြုသည်။ Flonase ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုတစ်ပါတ်သို့မဟုတ်ကြာကြာမရရှိနိုင်ပါ။ သို့သော်၎င်းကိုရေရှည်အသုံးပြုခြင်းသည်အန္တရာယ်ကင်းပါသည်။ Flonase သည်နှာခေါင်းပိတ်ဆို့ခြင်းထက် ပို၍ ကုသရန်ညွှန်ပြသည်။ နှာရည်၊ နှာချေခြင်းနှင့်ယားယံခြင်းများအပါအ ၀ င်မတည့်မှုတုံ့ပြန်မှုလက္ခဏာများကိုသက်သာစေသည်။ Afrin သည်ဤဓာတ်မတည့်မှုတုံ့ပြန်မှုအချက်များအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိပါ။
လေ့လာမှုတစ်ခုတွင်တစ်ပြိုင်နက်တည်းအသုံးပြုခြင်းကိုလေ့လာခဲ့သည် oxymetazoline နှင့် fluticasone သူတို့ပိတ်ဆို့မှုကိုအပေါ်တစ် ဦး ချင်းစီ၏တုံ့ပြန်မှုတိုးပွားနိုင်လျှင်ဆုံးဖြတ်ရန်။ ၎င်းသည်ကုသမှုအုပ်စုသုံးစုကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရသည်မှာ - ရလဒ်များအရအိပ်ယာ၊ oxymetazoline တစ်ခုတည်းနှင့် fluticasone - နှင့် oxymetazoline ။ ဒီလေ့လာမှုမှာ oxymetazoline ကိုသုံးရက်တာကာလထက်ပိုမိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ oxymetazoline နှင့် fluticasone နှစ်မျိုးလုံးကို အသုံးပြု၍ အုပ်စုတွင်နှာခေါင်းလေလေထုသည်သိသိသာသာမြင့်တက်ခဲ့သည်။ ဒါဟာအစပြန်ခုန်ပိတ်ဆို့မှုကိုမရှိကြောင်းမှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်, oxymetazoline တစ် ဦး တည်းနှင့်အတူအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုထပ်မံလေ့လာသင့်ကြောင်းအကြံပြုခဲ့သည်။ သင်၏ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူသည်မည်သည့်ကုန်ပစ္စည်းများသည်သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ကြောင်းဆုံးဖြတ်ရန်ကူညီနိုင်သည်။
Afrin နှင့် Flonase တို့၏ကုန်ကျစရိတ်နှိုင်းယှဉ်မှု
Afrin သည်ပုံမှန်အားဖြင့်အာမခံဖြင့်မရပေ။ အကြောင်းမှာဆေးညွှန်းထုတ်ကုန်မဟုတ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ Medicare နှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးအစီအစဉ်နှစ်ခုလုံးအတွက်မှန်ကန်သည်။ ၁၅ မီလီမီတာပုလင်းတစ်လုံးအတွက်လက်လီကုန်ကျစရိတ်သည် ၁၁ ဒေါ်လာခန့်မြင့်တက်နိုင်သည်။ သင်၏ဆရာ ၀ န်သည် Afrin အတွက်ဆေးညွှန်းကိုထုတ်ပေးနိုင်သည်။ SingleCare ကူပွန်နှင့်အတူယေဘူယျဗားရှင်းကိုဒေါ်လာ ၅.၁၁ အထိရနိုင်သည်။
Flonase သို့မဟုတ်၎င်း၏ယေဘုယျအားဖြင့်စီးပွားဖြစ်နှင့် Medicare မူးယစ်ဆေးဝါးအစီအစဉ်များဖြင့်အကျုံးဝင်သည်။ ရေမှုန်ရေမွှား ၁၂၀ ပါသည့်ပုလင်းထဲတွင် Flonase ၏လက်လီစျေးနှုန်းသည် ၂၈ ဒေါ်လာအထိရှိနိုင်သော်လည်းကူပွန်ဖြင့်လူနာများအနေဖြင့်ဆေးညွှန်းဖြင့်ဒေါ်လာ ၁၁ မှ ၁၂ ဒေါ်လာအထိသာပေးချေနိုင်သည်။
စံသောက်သုံးသော 15 ml ပုလင်း ၁၆ ဂရမ်ပုလင်း
ပုံမှန် Medicare copay n /aကွဲပြားသော်လည်းပုံမှန်အားဖြင့်ဒေါ်လာ ၁၀ ထက်လျော့နည်းသည်
SingleCare ကုန်ကျစရိတ် $ 5- $ 14 $ 11- $ 32
Flrinase vs. Afrin ၏ဘုံဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ
Afrin သည်နှာခေါင်း mucosa ကိုခေတ္တယာယီစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေကြောင်းလူသိများသောကြောင့်၎င်းသည်နှာချေခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဤသည်မှာအုပ်ချုပ်မှုမိနစ်အနည်းငယ်အတွင်း၌ပြုလုပ်သင့်သည်။ Afrin ကိုသုံးရက်ထက်ပိုပြီးသုံးပါကလူနာသည်ပြွတ်သိပ်နေနိုင်သည်။ ထို့အပြင် rhinitis medicamentmosa ဟုခေါ်သောဤဖြစ်စဉ်သည် Afrin ကြောင့်သွေးလွှတ်ကြောများသည်ဒေသတစ်သျှူးများသို့သွေးထောက်ပံ့မှုကိုဖြတ်တောက်လိုက်သောကြောင့်ဖြစ်ရခြင်းဟုယုံကြည်ရသည်။ ဤသည်ရောင်ရမ်းခြင်းနှင့်ရောင်ရမ်းခြင်းစေပါတယ်။ အဆိုပါပြန်ခုန်ပိတ်ဆို့မှုကို၏အာရုံ Afrin ကုသခဲ့သည်မူလပိတ်ဆို့မှုကိုထက်ပိုဆိုးခံစားရဟုဆိုသည်။
Flonase သည်ခေါင်းကိုက်ခြင်းနှင့်အတော်များများဖြစ်ပွားခြင်းများရှိသည် လူနာများ၏ 16% Flonase အုပ်ချုပ်မှုအပြီးခေါင်းကိုက်ခြင်းကြုံနေရ။ နောက်ထပ်အဖြစ်များသောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမှာနှာခေါင်းသွေးယိုခြင်းသို့မဟုတ် epistaxis ဖြစ်သည်။
Afrin နှင့် Flonase နှစ်မျိုးလုံးသည်နှာခေါင်း mucos ကိုယားယံစေနိုင်သည်။
ခေါင်းကိုက်ခြင်း မဟုတ်ဘူး n /aဟုတ်တယ် ၄% -၁၆%
မူးယစ်ဆေးဝါး မဟုတ်ဘူး n /aဟုတ်တယ် ၁% -3%
ပျို့ / အော့ မဟုတ်ဘူး n /aဟုတ်တယ် ၃% -5%
ဒေသခံယားယံ ဟုတ်တယ် သတ်မှတ်မထား ဟုတ်တယ် ၄% -၆%
intraocular ဖိအားတိုးလာ မဟုတ်ဘူး n /aဟုတ်တယ် ၁% -3%
Epistaxis မဟုတ်ဘူး n /aဟုတ်တယ် ၆% -၁၂%
နှာခေါင်း mucosal အနာ မဟုတ်ဘူး n /aဟုတ်တယ် ၃% -8%
နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်း မဟုတ်ဘူး n /aဟုတ်တယ် ၈%
အူလွန်ရောဂါ မဟုတ်ဘူး n /aဟုတ်တယ် ၅%
နှာခေါင်း mucosa အတွက်အသွေး မဟုတ်ဘူး n /aဟုတ်တယ် ၁% -3%
နှာခေါင်းခြောက် ဟုတ်တယ် သတ်မှတ်မထား ဟုတ်တယ် ၁% -3%
နှာခေါင်းပိတ်ဆို့မှုကိုပြန်ခုန်ထွက် ဟုတ်တယ် သတ်မှတ်မထား မဟုတ်ဘူး n / a
လည်ချောင်းနာသည် မဟုတ်ဘူး n /aဟုတ်တယ် ၁% -3%
ရင်းမြစ်: Afrin ( မင်းကွန်း ဖလိုနက် ( မင်းကွန်း ) ။
Afrin နှင့် Flonase မူးယစ်ဆေးဝါးအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှု
Afrin နှင့် Flonase နှစ်မျိုးလုံးသည်အဓိကအားဖြင့်ဒေသတွင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသော်လည်း၎င်းတို့ကိုနှာခေါင်းထဲ၌သက်ရောက်မှုရှိသော်လည်းအခြားဆေးဝါးများသည်၎င်းတို့နှင့်အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်။
Ergot အနကျအဓိပ်ပါယျဟာအမြှေးပါးရောဂါကိုကုသရာမှာအသုံးပွုနိုငျသညျ့ဆေးဝါးအတိုငျးတစျခုဖွစျသညျ။ Migranal သည်သိသိသာသာ vasoconstriction ဖြစ်ပေါ်စေခြင်းဖြင့်အလုပ်လုပ်သောနှာခေါင်းမှုန်ရေမွှားထုတ်လုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် vasoconstriction ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်ဖြစ်သော Afrin ၏တစ်ပြိုင်နက်တည်းအသုံးပြုခြင်းသည်အလွန်ပြင်းထန်သော vasoconstriction ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဤပေါင်းစပ်ခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်သင့်သည်။
Esketamine သည်နှာခေါင်းသွေးကြွဆေးကိုတစ်ပတ်နှစ်ကြိမ်သို့မဟုတ်နှစ်ကြိမ်သောက်သုံးသည်။ Afrin နှင့် Flonase နှစ်မျိုးလုံးသည် esketamine ၏သက်ရောက်မှုများကိုလျော့နည်းစေနိုင်သည်။ အကယ်၍ esketamine ဆေးသောက်သည့်နေ့တွင်နှာခေါင်း decongestant လိုအပ်သည်ဆိုပါက esketamine မတိုင်မီအနည်းဆုံးတစ်နာရီကြိုတင်သောက်သင့်သည်။
မူးယစ်ဆေးဝါး မူးယစ်ဆေးအတန်း Afrin Flonase
Atomoxetine Norepinephrine တားစီး ဟုတ်တယ် မဟုတ်ဘူး
ဆေးခြောက် Cannabinoids ဟုတ်တယ် မဟုတ်ဘူး
Desmopressin Vasopressin Analog စ မဟုတ်ဘူး ဟုတ်တယ်
Ergotamine Ergot အနကျအဓိပ်ပါယျ ဟုတ်တယ် မဟုတ်ဘူး
လွတ်မြောက် NMDA အဲဒီ receptor ရန် ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်
Fentanyl (နှာခေါင်းသွေးရည်ကြည်) Opioid ဟုတ်တယ် မဟုတ်ဘူး
Tedizolid ပိဇီဝဆေး ဟုတ်တယ် မဟုတ်ဘူး
Doxepin Tricyclic စိတ်ကျရောဂါ ဟုတ်တယ် မဟုတ်ဘူး
Flonase vs. Afrin ၏သတိပေးချက်များ
Afrin သည် ၁၂ နာရီလျှင်တစ်ရက်သုံးရက်ထက်မကသောဆေးထိုးခြင်းကိုသာအသုံးပြုရန်ရည်ရွယ်သည်။ ဤထုတ်ကုန်ကိုအကြံပြုထားတာထက်ပိုပြီးအသုံးပြုခြင်းသည်အလွန်အမင်းပြန်ခုန်ထွက်နိုင်သည်။ Afrin သည်နှာခေါင်းပေါက်ခြင်း၊ ယားခြင်းသို့မဟုတ်လောင်ကျွမ်းခြင်းကဲ့သို့သောယာယီအဆင်မပြေမှုကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။
Flonase သည်နှာခေါင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းသို့မဟုတ်ခွဲစိတ်ကုသပြီးနောက်ကုသမှုကိုနှေးကွေးစေပြီးသင့်ဆရာဝန်ကအတည်ပြုသည်အထိမသုံးသင့်ပါ။ အကယ်၍ သင်သည်စနစ်တကျ steroids သို့မဟုတ် HIV ဆေးများကဲ့သို့သော immunosuppressant မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုသောက်ပါက Flonase မသုံးမီသင့်ဆရာဝန်သို့မဟုတ်ဆေးဝါးဆရာဝန်နှင့်ဆွေးနွေးပါ။ ဆေးထိုးပြီးနောက်နှာချေခြင်းသို့မဟုတ်နှာချေခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်၏ရောဂါလက္ခဏာများသည်ခုနစ်ရက်ပတ်လုံးသုံးပြီးသောနောက်တွင်မတိုးတက်ပါကသင်၏ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ပါ။
နှာခေါင်းမှုန်ရေမွှားကွန်တိန်နာကိုလူတစ် ဦး တစ်ယောက်တည်းအသုံးပြုရန်ရည်ရွယ်သည်။ နှာခေါင်းမှုန်ရေမွှားကွန်တိန်နာမျှဝေခြင်းကူးစက်မှုကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ နှာခေါင်းမှုန့်များကိုမျက်လုံးများနှင့်ပါးစပ်များတွင်မဖြန်းသင့်ပါ။
Afrin vs. Flonase နှင့်ပတ်သက်ပြီးမကြာခဏမေးသောမေးခွန်းများ
Afrin သည်နှာခေါင်းမှုန်ရေမွှားကိုတားဆီးနိုင်သောဆေးဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် oxasetazoline ပါဝင်သည်။ ၎င်းသည်ဒေသခံ vasoconstriction ကိုဖြစ်ပေါ်စေသော alpha-adrenergic agonist ဖြစ်သည်။ Afrin သည်လျင်မြန်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်သော်လည်းသုံးရက်ထက်ပိုပြီးမသုံးသင့်ပါ။
Flonase သည် corticosteroid နှာခေါင်းမှုန့်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်နှာခေါင်းလမ်းကြောင်းအတွင်းရှိရောင်ရမ်းဖျန်ဖြေသူများ၏ထုတ်လုပ်မှုကိုလျှော့ချပေးသောတက်ကြွသောပါဝင်မှုပါဝင်သော fluticasone ပါဝင်သည်။ Flonase သည်ရက်သတ္တပတ်များစွာသို့မဟုတ်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာတွင်၎င်း၏အပြည့်အ ၀ သက်ရောက်မှုကိုရောက်ရှိစေပြီးရေရှည်အသုံးပြုရန်လုံခြုံသည်။
Afrin နဲ့ Flonase အတူတူလား။
Afrin နှင့် Flonase နှစ်ခုစလုံးသည်နှာခေါင်းမှုန်ရေမွှားများဖြစ်သော်လည်းနှာခေါင်းပိတ်ဆို့ခြင်း၏လက္ခဏာများကိုသက်သာစေသည်။ Afrin သည်ဒေသတွင်း vasoconstrictor တစ်ခုဖြစ်သည်။ Flonase သည်ဓာတ်မတည့်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သောရောင်ရမ်းတုံ့ပြန်မှုကိုဖျန်ဖြေပေးသော steroid ဖြစ်သည်။
Afrin သို့မဟုတ် Flonase ပိုကောင်းသလား။
Afrin သည် ၁၀ မိနစ်အတွင်းလုပ်ဆောင်မှုစတင်ခြင်းနှင့်အတူပိတ်ဆို့မှုကိုပိုမိုမြန်ဆန်စွာတုန့်ပြန်သည်။ သို့သော်သုံးရက်ထက် ပို၍ အသုံးပြုရန်မတိုက်တွန်းပါ။ Flonase သည်ပိတ်ဆို့ခြင်းလက္ခဏာများကိုသက်သာစေရန်နှေးကွေးသော်လည်းရေရှည်တွင်လုံခြုံစွာအသုံးပြုနိုင်သည်။ Flonase သည်အခြားမတည့်မှုလက္ခဏာများဖြစ်သောနှာရည်၊ နှာချေခြင်း၊
ကိုယ်ဝန်ရှိနေစဉ် Afrin သို့မဟုတ် Flonase ကိုသုံးလို့ရပါသလား။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ပထမသုံးလပတ်တွင် Afrin အသုံးပြုမှုနှင့်သန္ဓေသားပျက်ခြင်းသွင်ပြင်လက္ခဏာများရှိသည်။ ကိုယ်ဝန်နှောင်းပိုင်းတွင်တစ်ကြိမ်သာအသုံးပြုခြင်းသည်အန္တရာယ်ရှိသည်ဟုမပြနိုင်သော်လည်း Afrin သည်ကိုယ်ဝန်တွင်နှာခေါင်းအဆို့စားခြင်းမဟုတ်ပါ။ Flonase သည်ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုရှိသော်လည်းအခြား decongestant သို့မဟုတ် steroid spray များသည်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုဆိုင်ရာအချက်အလက်များပိုမိုရရှိနိုင်ပါသည်။ သင့်ဆရာ ၀ န်နှင့်တွေ့သည့်နှာချေဆွေးဆေးကိုရွေးချယ်ပါ။
ကျွန်ုပ်သည် Afrin (သို့) Flonase ကိုအရက်ဖြင့်သုံးနိုင်သလား။
Afrin နှင့် Flonase သည်အရက်အလွန်အကျွံသောက်သုံးသောလူနာများကိုအန္တရာယ်ကင်းစွာစီမံနိုင်သည်။
Afrin ဟာ Steroid တစ်မျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ ၎င်းသည် alal-adrenergic agonist သည်နှာခေါင်းလမ်းကြောင်းအတွင်း vasoconstriction အားဖြင့်အလုပ်လုပ်သည်။
ဖလိုရိုက်သည်ဆေးဝါးဆိုင်ရာဆေးဝါး (antihistamine) သို့မဟုတ်ဆေးမပြန့်သောဆေးဖြစ်ပါသလား။
Flonase သည် anti -istamin သို့မဟုတ် antongistantant မဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည်မတည့်သည့်တုံ့ပြန်မှုအတွင်းမှထွက်သောရောင်ရမ်းဖျန်ဖြေသူများ၏စိမ့်ဝင်ခြင်းအားဖြင့်နှာခေါင်းပိတ်ဆို့ခြင်း၏လက္ခဏာများကိုသက်သာစေသည်။
ဘယ်အချိန်မနက်သို့မဟုတ်ညအချိန်တွင် Flonase ကိုယူသင့်သနည်း။
Flonase ကိုနည်းလမ်းနှစ်မျိုးဖြင့်ထိုးနိုင်သည်။ လူနာသည်နှာခေါင်းတစ်ခုစီတွင်နံနက်တိုင်းနှင့်ညနေခင်း (၂၄ နာရီကာလအတွင်းစုစုပေါင်းမှုန်ရေမွှားလေးခုအထိ) တွင်တစ်မှုန်ရေမွှားတစ်ခုစီကိုစီမံနိုင်သည်သို့မဟုတ်လူနာများသည်နှာခေါင်းတစ်ခုစီတွင်ရေမှုန်ရေမွှားနှစ်ခုကိုတစ်ချိန်၊ နံနက်သို့မဟုတ်ညနေပိုင်းများတွင်စီမံနိုင်သည်။
zyrtecdကဘာအတွက်ကောင်းလဲ။
၇၂ နာရီအကြာတွင် planbဆေးကိုသောက်ပါ